सीमाना पुरस्कार मठ | Martech Zone
मसँग केही समयको लागि सीमा पुरस्कार कार्डहरू थिए र मैले भर्खर एउटा ईमेल प्राप्त गरें कि मँ खर्च गर्न सक्ने पैसाको एक टुक्रा छ। म अनलाइन र आफ्नो वेबसाइट को साथ दर्ता भयो। त्यस बिन्दुमा उनीहरू दर्ताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्थे र मलाई तीन विकल्पहरू मध्ये एकले पुरस्कृत गरे:
२०% एक वस्तु बन्द जब म $ २० वा अधिक खर्च गर्दछ
एक नि: शुल्क १२oz तातो पेय पदार्थ
$ १० जब म $ or० वा अधिक खर्च गर्दछु
के अरु कसैलाई पनि हास्यास्पद लाग्छ कि # १ र # the उस्तै छन्? यदि म $ 1 खर्च गर्दछु भने, प्रोत्साहन २०% भन्दा बढि हुनु हुँदैन?
हुनसक्छ यो म मात्र हो। म यसको कदर गर्छु, यद्यपि! र ... म साँच्चिकै सीमाहरूलाई प्रेम गर्दछु!
मार्क्स 6, 2007 मा 10: 48 PM
20% छुट $100 = $20 छुट
$10 छुट 100 = $10 छुट
अगस्ट 9, 2007 मा 2: 07 AM
त्यसैले शीर्षक 'बोर्डर्स रिवार्ड्स म्याथ' हो, अर्थात्, $10 वा सोभन्दा बढी कुपनमा $50 छुट लिनुको कुनै फाइदा छैन।
जनवरी 4, 2011 2:11 बजे
1 र3बीचको भिन्नता यो हो कि # 1 मात्र एक वस्तुमा लागू गर्न सकिन्छ। #3 असीमित वस्तुहरूको लागि हो।